3M waxay siisaa shaqaalaha iyo hawl-gabka deeqaha u dhigma March 2-13 - Cunnooyinka Taayirada
3M waxay siisaa shaqaalaha iyo howlgabyada tabarucaadka u dhigma deeqaha Maarso 2-13
Cunnooyinka Wheels-ka ayaa nasiib u leh inay taageero joogto ah ka helaan 3M iyo shaqaalaheeda. Koox mutadawiciin ah oo ah 3M mutadawiciin ah ayaa cunno ku siisay Wheels muddo tobanaan sano ah iyo mar labaad, 3M Foundation waxay u oggolaan doontaa shaqaalaha iyo dadka hawlgabka ah inay labanlaabaan deeqaha ay siinayaan Cunnada Wheels Maarso 2-13.
Sanadkii la soo dhaafay, tabarucaadka shaqaalaha iyo hawlgabyada oo ay weheliso ciyaarta 3M Foundation ayaa laga soo qaaday $13,000 oo loogu talagalay Cuntada Lugaha. Fursadani waxay timaaddaa iyada oo qayb ka ah barnaamijka 3M ee Gaajada Gaajada waxayna u oggolaaneysaa shaqaalaha hal shirkad inay saameyn weyn ku yeeshaan nolosha dadka waayeelka ah ee beesheena iyada oo loo marayo maalmo kooban oo wax la bixinayo.
Cunnooyinka Lugaha ayaa jeclaan lahaa inaan u fidinno mahadnaqeena mahadnaqa ah 3M Foundation iyo shaqaalihii 3M ee hore iyo kuwa haddaba taageeradooda. Kuwa xiiseynaya kaqeyb galka 3M ee Gaajada Gaajada Maarso 2-13 way raaci karaan tilmaamahan:
Markaad gasho, deeqbixiyuhu wuxuu doortaa barnaamijka "Gaajada Gaajada".
Kuuboon labaad ee boostada ayaa la soo diraa, deeqda, ilaa Cunnada metrooga ee giraangiraha. Jeegag ayaa loo diri karaa Cuntada metrooga ee gawaarida, 1200 Washington, Ave. S., Suite 380, Minneapolis, MN 55415. Hadiyadaha sidoo kale waxaa lagu samayn karaa khadka tooska ah annaga ku deeqo bogga.
Si aad xaq ugu yeelatid ciyaarta, deeqaha waa in laga diiwaan geliyaa khadka tooska ah inta u dhexeysa Maarso 2 iyo Maarso 13, 2015.
Websaydhka ku-deeqidda 3M lama heli doono illaa iyo Maarso 2.